Vahaolan’ny fahafenoan’ny fonja :: Raikitra ny fitsarana faobe an’ireo voafonja miandry didy • AoRaha
Vahaolan’ny fahafenoan’ny fonja Raikitra ny fitsarana faobe an’ireo voafonja miandry didy
Hiakatra fitsarana faobe ireo voafonja mbola tsy namoahana didim-pitsarana. Tapaka tao anatin’ny Filankevitry ny minisitra, notanterahina teny Iavoloha, tamin’ny alarobia hariva teo fa hanaovana fitsarana mitety vohitra izy ireo.
“Hanomboka amin’ny alatsinainy 21 oktobra 2019 izany”, araka ny toromarika nataon’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, nandritra an’io filankevitra io. Nohamafisina teny Iavoloha ihany koa fa: “ireo voafonja tamina ady heloka tsotra sy ady madio no hotsaraina amin’izany”.
Fitsarana ara-drariny no takian-dRajoelina Andry. Notsipihiny mazava tamin’ity fivoriana ity fa: “tokony havahan’ireo mpitsara mazava tsara ny heloka tsotra sy ady heloka madio amin’ny ady heloka bevava”. Araka ny efa nambarany dia tsy ho isan’ireo hahazo ny famindram-pon’ny fitondram-panjakana ireo sokajina voafonja voasaringotra amina vono olona, na fanodinkodinam-bolam-panjakana ary ny fakàna an-keriny.
Ho famahana ny olana mikasika ny fahafenoan’ny fonja no antony nandraisana an’ity fepetra ity, araka ny efa fampanantenana nataon’ny Filohan’ny Repoblika. Ny enimpolo isan-jaton’ireo voafonja, amin’izao fotoana izao, no efa migadra anefa mbola tsy namoahana didim-pitsarana. An’arivony maro, araka izany, ireo voafonja hiatrika ny fitsarana mitety vohitra hanenika miandalana an’i Madagasikara.
“Mbola vao eo am-piraketana ireo antotan-kevitra mikasika ny isan’ireo voafonja ireo izahay ankehitriny. Hoampahafantarina miandalana ny fanampim-baovao momba izany”, hoy ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana. Voalaza fa miankina amin’ny heloka vitany sy ny fotoana nitazonana azy ireo teny am-ponja ny famoahana na tsia azy ireo.
Ankilan’izay, notakian’ny Filohan’ny Repoblika ihany koa ny fanamafisana ny serasera sy ny fampitam-baovao ho an’ny vahoaka amin’ireo asa tanterahan’ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta. « Ilaina ny fanazavana ny saim-bahoaka amin’ireo trangam-piarahamonina sy ny fitantanan-draharaham-panjakana amin’ny ankapobeny », araka ny toromarika nation-dRajoelina Andry. Manoloana ny fampitam-baovao tsy voamarina miparitaka amin’ireo tambajotran-tserasera izay mampisavorovoro ny saim-bahoaka no antony nanomezany an’ity toromarika manokana ity.